အလင်းသစ်: ၈၈ ကျောင်းသားအမည်ခံ မွတ်ဆလင် ( ၇၈၆ ) လူမျိုး မြအေး၏ သရုပ်မှန်
၈၈ ကျောင်းသားအမည်ခံ မွတ်ဆလင် ( ၇၈၆ ) လူမျိုး မြအေး၏ သရုပ်မှန်
မူဆလင်မြအေးသည် ၈၈၈၈ တုန်းက ကျောင်းသားတဦးမဟုတ်တော့ပါ။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံအတွင်း မြအေးဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ မြအေးဘာမှမလုပ်ပါ။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံတုန်းက ပေါ်ထွက်လာသော ကျောင်းသားများဖြစ်သော မင်းကိုနိုင်နှင့် မိုးသီးဇွန် တို့ကို ၈၈၈၈ တုန်းက မြအေးအမည် ကြားဘူးသလား၊ မြအေးနှင့် လက်တွဲ လုပ်ဘူးသလားဟု မေးလျှင်တူညီသော အဖြေထွက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ အဖြေကတော့ နိုးဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးသီးဇွန်ကတော့ အခုသူများရောင်လို့ နည်းနည်းရောင်ချင်နေသည်။ ဒီနေရာကနေ အကြံပေးချင်တာကတော့၊ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးကြည့်။ ငါ၊သူ့ကို ၈၈၈၈ တုန်းကကြားဘူးလား . . . နိုး။ ငါသူနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဘူးလား . . . . . နိုး။ ခဏခဏရွတ်ပြီးကိုယ်ဘာသာ ကိုယ်မေးသင့်ကြောင်းအကြံပြုချင်ပါတယ်။
၈၈၈၈ နောက်ပိုင်းကို ကြည့်လိုက်ပြန်လျှင် ဒေါ်စုကိုဝိုင်းရံသော ကျောင်းသား၊ လူထုထဲတွင် ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်း ဆောင်ဆိုသော ကိုမြအေးကို တွေ့ရှိပါသလားဆိုလျှင်လည်း . . . နိုးပါဘဲ၊ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ဒေါ်စုအနားမှာ ရပ်နေသော ပုံလေးတပုံကို အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှာ မတင်နိုင်ရှာပါဘူး။ ကိုမြအေး internationalဆု တဆုရဖို့ အသဲအသန်ကြော်ငြာထိုးနေရတဲ့ UKရောက် မြန်မာမူဆလိမ်များအတွက် ဘားမားဒိုင်ဂျက် (အမှန်တကယ်ဆိုUKရောက် မူဆလိမ်များရဲ့ မြန်မာလူမျိုးများကို လှည့်စားရန် ပြုလုပ်တဲ့ အဖွဲ့သာ ဖြစ်တယ်၊ ကပ်ပြီးဖြီးထားတာကတော့ world ဒိုင်ဂျက်ရဲ့ အသင်းဝင်ဆိုပြီး အတင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ၀င်ထားတယ်) ကပေးတဲ့ဆုလေးနဲ့ဘဲ တင်းတိန်နေရရှာတယ်။ အနှီပါ ကိုမြအေး ဘယ်ကမ်း၊ ဘယ်ခြေ၊ ဘယ်ချောင်မှာတုန်းဟု မေးလျှင်၊ ယခုနိုင်ငံရေးလုပ်နေသော မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးအစရှိသော ၈၈၈၈ လုံးကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ ယခုပြည်ပရောက် ဟိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင်၊ သူများရောင်၍ လိုက်ရောင်နေရသော ၈၈၈၈ အမည်တပ် ဘလော့ဂါများလည်း မသိကြပါ။
၁၉၈၉ ရောက်လို့ ပါတီတွေဖွဲ့ကြမှ သူနဲ့ဘွဲ့ရ မူဆလင်တွေပေါင်းပြီး၊ မူဆလင်နာမည်မသုံးဘဲ၊ ကျောင်းသား ခေတ်စားတဲ့ကာလဆိုတော့ ဘွဲ့ရကျောင်းသားအနေနဲ့ဘဲ နာမည်သုံးပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတယ်။ အောင်ထွန်းဆိုတဲ့ မူဆလင်လဲသူတို့နဲ့ တဖွဲ့တည်းထင်တယ်။ အဲဒီကောင်ကိုတောင် ပြည်ပရောက် မူဆလင်(ယူကေ)က ကျောင်းသားသမဂ္ဂအကြောင်းကို ရေးတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး အင်တာနက်မှာ တင်ပေးသေးတယ်။ ခုတော့ဒီကောင်ကြောက်ချီးပါပြီး နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ပါဆိုပြီး ကြေငြာထားတယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘွဲ့ရကျောင်းသားအမည်ကို သုံးရင် ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာတခုများချိတ်မလား ဆိုပြီးသူတို့ဘွဲ့ရ မူဆလင်တစုထလုပ်တာ၊ ကျောင်းသားဆို အဲဒီအချိန်ကအသေကြောက်တဲ့ နအဖ က ကျောင်းသားအမည်သုံးထားတဲ့ သူတို့အဖွဲ့ကို ကိုင်ထည့်လိုက်တာ၊ မြအေးနဲ့ အောင်ထွန်းထောင်ထဲရောက် သွားတယ်။
၁၉၈၉ က ထောင်ထဲရောက်တဲ့ မြအေး ၁၉၉၆ မှာ ထောင်ကလွတ်တယ်။ ကြောက်လန့်သွားပြီး ၁၁ နှစ်လုံးလုံးငြိမ်နေတယ်။ ၂၀၀၆ ကုန်ခါနီး (သို့) ၂၀၀ရ အစလောက်ထင်တယ်၊ ဝေနှင်းပွင့်သုန် အင်္ဂလန်ကို စာသင်ဖို့ပို့တယ်။ အင်္ဂလန်ရောက် ဝေနှင်းပွင့်သုန်က အများနည်းတူဘဲ တရားဝင်နေလို့ရအောင်၊ မြအေးတို့ ပါတီထောင်ကတည်းက ပိုက်ဆံထောက်ပံ၊ ချိတ်ဆက်ရှိတဲ့ ယူကေ ကမူဆလင်တွေအကူအညီနဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လုပ်တယ်။ ၁၉၉၆ ကတည်းက ၁၁ နှစ်လုံးလုံး ငြိမ်နေခဲ့တဲ့မြအေးက ၂၀၀ရ မှာ သမီးနိုင်ငံရေးခိုလှုံတာကို အဆင်ပြေအောင်၊ သက်သေပြလို့ရအောင်လို့ ၈၈၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနဲ့ ပူးတွဲတွဲလုပ်တယ်။ မြအေးမှာ ကိုကိုကြီးနဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ အဲဒီဓါတ်ပုံလေးဘဲ၊ မူဆလင်တွေအခုသုံးနေကြတာ၊ စစ်အစိုးရက မြအေးကို ကိုကိုကြီးတို့ နဲ့ရောပြီး ထောင်ထဲပြန်ထည့်တယ်၊ ဝေနှင်းပွင့်သုံက သူ့ကြောင့် သူ့အဖေထောင်ထဲရောက်တယ်ဆိုပြီး ယူကေ မူဆလင်အသင်းထောက်ခံချက်နဲ့ ဘားမားကင်းပိန်းယူကေမှာ ၀င်လုပ်တယ်၊ မူဆလင်တော်တော်များများနေရာယူထားတဲ့ အဲဒီအသင်းမှာ ရှိတဲ့ ဖဒိုမန်းရှာသမီးကို ကျော်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ တော်တော်ကြာပြီ၊ ဦးမန်းရှာသမီးက တော်လှန်ရေးနောက်ခံကောင်းတော့ တော်တော်နဲ့ မရရှာဘူး။ ဒီတကွေ့မှာတော့ အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်း မပြောနိုင်တဲ့ ၈၈ ဘလော့ဂါတွေ တင်ပေးလိုက်တာ နေရာရနေတယ်ဆိုရမှာ . . . . လေအကျိုးပြုတယ်ဆိုရမလား။ လေနဲ့လုပ်စားသွားတာ၊ သူတင်ထားတဲ youtube ရဲ့၈၀ ရာနှုံးက သူတို့ဘာသာသူတို့ ရိုက်ပြီးအင်တာဗျူးသလိုတင်ထားတာ၊ သေသေချာကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်။
Posted by အလင်းသစ် at 5:20 PM
Anonymous December 1, 2010 at 1:32 PM
Behonest,this is what kind of people we are facing with over century that let every one hopeless, included burmese poeple today's life. Burmese dictator view nothing different from this guy view on above the metion. Let me make clear that if your people keep try to praticing this kind of views. your people may left with nothing inafuture day.
အိမ် December 1, 2010 at 2:54 PM